Diseembar | 2018 | WEEJIDOW
Archive for Diseembar, 2018
War deg deg ah: Ergeyga Qaramada Midoobey oo warqad kulul u qoray Wasiirka Amniga (Dhacdadii Baydhabo iyo Xariggii Roobow
Diseembar 31, 2018
WAAJIDPRESS – 31 December 2018:
XILDHIBAAN AXMED CABDULLE MAYOW OO MAANTA AAS QARAN MUQDISHO LOOGU SUUBIYEY
Masjid kuyaala xarunta Madaxtooyada Soomaaliya waxaa salaada Janaasada lagula dukaday Allaha u naxariistee Marxuun Xildhibaan Axmed Mayoow Cabdulle (Korneel Ruush) oo shalay galab ku geeriyooday Muqdisho.
Guddoomiyaha Golaha shacabka ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya mudane Dr. Maxamed Mursal Sheekh CabdiRAXMAAN ayaa saakay ka qeyb galay Salaada Janaasada ee Marxuum Xildhibaan Axmed Mayoow Cabdulle (Korneel Ruush) – (oo ka soo Jeedey BEELWEYNTA DIGIL iyo MIRIFLE) – ALLAHA U NAXARIISTO.
Shalay galab ayaa Xildhibaanka wadnaha istaagay, waxa uu ugu dambeyn ku geeriyooday Isbitaalka Digfeer ee Muqdisho, iyadoo maanta lagu aasay isla Muqdisho.
War deg deg ah DAAWO: Faroole oo weerar afka oo culus ku qaadey Madaxweynaha PUNTLAND Gaas
Diseembar 30, 2018
WAAJIDPRESS – 30 December 2018:
War deg deg ah: Guddoomiye kuxigeen Degmo iyo qaar ka mid ah ilaaladiisa oo weerar lagu dilay
Rag hubeysan ayaa weerar ku dilay Guddoomiye ku xigeenkii Degmada Matabaan iyo Saddex ka mid ah ilaaladiisa, sida ay inoo sheegeen saraakiil ka tirsan laamaha ammaanka.
Allaha unaxariistee Guddoomiye kuxigeenka la dilay oo lagu magacaabi jiray Faarax Nuur Guure (Faarax Dheere) iyo ilaaladiisa ayaa la dilay, kadib markii loo galay wadada.
Faarax Dheere iyo xubnaha la socday ayaa ka yimid dhanka Degmada Maxaas, waxayna ku sii jeedeen magaalada Beledweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Warar madax banaan ayaa sheegaya Dableyda weerarka geysatay inay horey u sii qaateen Hubka iyo Gaarigii uu watay Guddoomiye kuxigeenka.
Ciidamo ka tirsan xoogga dalka ayaa ku baxay goobta uu weerarka ka dhacay, waxayna ku raad joogaan gacan ku dhiigalayaasha.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaasi lagu dilay gudoomiye ku xigeenkii Degmada Matabaan iyo ilaaladiisa.
War deg deg ah: Gudoomiye Waaxeed ka tirsan Maamulka degmada Xamarweyne oo Maanta Muqdisho lagu diley
Diseembar 29, 2018
WAAJIDPRESS – 29 December 2018:
Kooxo hubeysan ayaa goor dhow dil u geystay guddoomiyihii Waaxda Horseed oo ka tirsan degmada Xamar Weyne ee gobolka Banaadir kaasoo lagu magacaabi jiray Xaaji Iikar (ALLAHA U NAXARIISTO).
Dad goobjoogayaal ah ayaa Dalsan waxa ay u sheegeen in dilka uu ka dhacay Xaafadda Koodka gaar ahaan meel u dhow Masjidka Aw-Cismaanka ee degmada Xamarweyne ee Muqdisho.
Dableyda ayaa sidoo kale dilay nin shacab ah oo la socday kaasoo wararka qaarkood ay sheegayaan inuu ka tirsanaa shaqaalaha shirkadda Dahabshiil Laanta Xamar-weyne kaasoo magaciisa lagu sheegay Maxamed Muxyadiin sida goob joogayaal ay ku warameen.
Xaalada degmada Xamar-weyne ayaa kacsan caawa waxaana lagu soo daadiyey ciidamo ka tirsan amaanka oo baadi goobaya kooxaha dilka geystay oo baxsaday.
Magaalada Muqdisho ayaa ku soo batey dilalka qorsheysan, kuwaasi oo loo geysto Mas’uuliyiinta ka tirsan Dowlada iyo dadka shacabka ah,waxaana Mas’uuliyadooda sheegta Al-shabaab.
War deg deg ah DAAWO: MADAXWEYNAHA GALMUDUG XAAF OO EEDEYN KULUL U JEEDIYEY DOWLADA FARMAAJO
“Runtii dowladda Federaalka dagaal ayay nagula jirtaa dhaqaalihii waa nagala jaray 19 bilood aan jirnay,maalin walba Guddi federal ayaa naloo soo diraa kuwaas oo Galmudug burburinaya ayuu yiri Madaxweyne Xaaf – DAAWO:
War deg deg ah Akhriso ka dib DAAWO: dowlad Goboleedka Puntland oo deeganadeeda ka mamnuucday masuuliyiinta Dowladda Federaalka
Puntland ayaa sheegtay in ay mamnuucday inta doorshadu socota shaqaalaha dowladda Federaalka Soomaaliya sida Wasiirada, Agaasimayaasha ,Saraakiisha ciidanka iyo hawlwadeenada Madaxtooyada ka tirsan dowlada Farmaajo iyo Kheyre.
2 – Inta doorashada Puntland ay dhacayso waxaa la mamnuucay inay soo galaan shaqaalaha dowladda Federaalka Soomaaliya, sida Wasiirada, Agaasimayaasha,Saraakiisha Ciidamada iyo howl wadeenada Madaxtoyada Soomaaliya.
4 – In diyaaradaha imaanaya Puntland ay soo gudbiyaan liiska rakaabka ay wadaan ka hor inta aysan ka soo degin garoomada Puntland.
5 – Si loo sugo ammaanka xiliga doorashada in la baari doono cid kasta oo soo gasha xaduudaha Puntland
7 – Inaan lagu qaban karin Garowe shirar siyaasadeed oo maamulka gobolka Nugaal uusan ogeyn – DAAWO:
Guddoomiye Mursal iyo Farmaajo oo Hal Arrin isku mari la’ & Guriga cusub uu u Guurayo Guddoomiyaha
WAAJIDPRESS – 28 December 2018:
Warar hoose ayaa sheegaya in Guddoomiyaha Golaha Shacabka Dr. Maxamed Mursal Sheekh Cabdi raxmaan uu ka diiday Madaxweyne Farmaajo inay dib ugu soo laabto Hoygii uu ka degenaa Madaxtooyada Soomaaliya.
War hadda soo dhacay: Nin Shabaab ka tirsanaa oo saakay lagu toogtay Magaalada Baydhabo
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa saakay xukun dil ah ku fulisay nin ka tirsanaa Ururka Al Shabaab, kaasoo sanadkii hore Masaajid ku yaala Magaalada Baydhabo ku dhex dilay Sheekh Maxamed Deyr, oo ka mid ahaa culimada deegaanka.
Ninkan oo lagu magacaabo Maxamed Aadan Cali Barrow ayaa bartamihii bishii June ee sanadkii hore Masaajidkan oo ku yaala xaafadda Towfiiq si naxariis darro ah ugu dilay Sheekh Maxamed Deyr, oo si weyn looga garanaayay Magaalada Baydhabo.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa 21-kii bishii June ee sanadkii 2017 xukun dil ah ku riday Maxamed Aadan Cali Barrow, ka dib markii uu qirtay dilka wadaadka, halka laba nin oo kale oo dilkaasi ku wehlineysay lagu xukumay xabsi daa’in.
Saakay oo taariikhdu ku beegan tahay 29-ka December ayaa waxaa ninkan lagu fuliyay xukunkii dilka ahaa, ee ay ku riday Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida.
Saraakiisha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ayaa sheegay nin kasta oo Shabaab ka tirsan oo dil gaysta in la toogan doono, isla-markaana aanay wax naxariis ah u samayn doonin.
General Mahad C/raxmaan Aadan, Taliyaha Ciidanka Booliska Koonfur Galbeed ayaa kol hore sheegay in soo qabashada dembiilahan ay gacan ka gaysteen dadka reer Baydhabo.
Maaha markii ugu horeysay oo Magaalada Baydhabo lagu toogto xubin ka tirsan Ururka Al Shabaab, sanadkii hore ayay ahayd markii magaaladaasi lagu toogtay afar Shabaab ahaa, oo ka masuul ahaa qaraxyo ay dad badani ku dhinteen oo magaaladaasi ka dhacay.
Maamulka Puntland u digey dowlada Farmaajo iyo Al Shabaab oo Caawa Sadex askari ku dishay magaalada Boosaaso
Diseembar 28, 2018
Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in dagaalyahano hubeesan oo katirsan Al Shabaab caawa fiidkii magaalada Boosaaso ku dileen sadex askari oo katirsan ciidamada Puntland.
Sida aan Wararka ku helnay kooxo biskoolado ku hubeesnaa ayaa goob mehrad ah waxa ay ku dhax dileen sadex askari oo katirsanaa ciidamada Daraawiishta Puntland gaar ahaan kuwa ka dagaalama aaga buuraha Galgala.
Goobjooge ayaa ku waramay in sadexda askari ee katirsanaa ciidamada Daraawiishta Puntland lagu dilay meel ku dhaw xarunta dhexe ee shirkada isgaarsiinta Golis ee kutaala magaalada Boosaaso.
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilkan loo geestay ciidamada katirsan Daraawiishta Puntland, waxaana war kasoo baxay Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidankan lagu weeraray goob isku imaatin ah .
Ciidamada maamulka Puntland ayaa howlgalo balaaran ka sameeyay aaga lagu dilay ciidamadan katirsan Daraawiishta Puntland, lamana oga in howlgalkaasi ciidamada Puntland kusoo qabteen kooxdii dilka geesatay.
Dhinaca kale, Maanta, Maamulka Puntland ayaa Ciidamo dheeraad ah geeyay Garoomadda Diyaaradaha ee maamulka Puntland si looga hortaggo in lacago lagu galo doorashadda laga soo dejiyo magaalooyinka Puntland.
Puntland ayaa qabta cabsi weyn oo ku aadan in dhaqaallo lagu bixiyo doorashadda maamulka Puntland ee 8 Bisha soo socota ka dhaceysa Magaalada Garowe ee Caasimadda Puntland.
Ammaanka Garoomadda ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana hadda socda Baaritaano ku aadan shaqsiyaadka doonaya xilka Madaxtinimadda maamulka Puntland.
Ciidamada Ammanka ayaa lagu amray in ay hubiyaan dhaqdhaqaaqyadda Garoomadda iyo waliba dadka kasoo deganaya.
Ku dhawaad 30 Musharax ayaa ku sugan Magaalada Garowe, waxaana qaarkood la sheegay in ay taageero ka helayaan dowladda dhexe ee Soomaaliya.
You are currently browsing the WEEJIDOW blog archives for Diseembar, 2018.